Shabaab oo gaadiid ku qabsaday dagaal ay ku soo qaadeen deegaanka Warmaxan ee Sh.hoose – idalenews.com
Shabaab oo gaadiid ku qabsaday dagaal ay ku soo qaadeen deegaanka Warmaxan ee Sh.hoose
Warmaxan(INO)- Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda Federaalka Somaliya iyo kuwa Al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Warmaxan oo ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose.
Wararka waxay sheegayaan in dagaalkan uu biloowday kadib markii dagaalyahannada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka dowladda ku lahaayeen deegaankaasi.
Inta la xaqiijiyay Labo ruux oo mid ka mid ah ahaa qof madaxa looga jiro ayaa dagaalkaasi ku dhintay iyadoo dhaawaca uu intaasi ka badan yahay.
Mid kamid ah dadka ku dhaqan deegaanka Warmaxan ee lagu dagaallamay ayaa sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay deegaankaasi daqiiqado badan gacanta ku hayeen, islamarkaana halkaasi ay ka qaateen Labo gaari oo dad shacab ah ay lahaayeen.
Michael Keating oo ka hadlay shaqooyinka ugu horeeya ee horyaala Madaxweyne Farmaajo